Kedu ihe bụ ndị na ndị a ma ama na-eme ihe ike na Spain | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe na ndị bụ ndị ama ama na Spen
Kedu ihe bụ influencer? Kedu otu ọ ga - esi enyere azụmahịa m aka? Gịnị bụ nkwa ọlụlụ? Kedu uru ọ na-eweta na e-azụmahịa? Kedu ihe ọ ga - abụ iji bụrụ onye na - eme ihe ike? Kedu otu o si dị mma ịrụ ọrụ dị ka onye na-emetụta ihe dị na ya? Etu ị ga - esi bụrụ onye nrụpụta?
Oke ajụjụ? Abụ m karịa Anyị na-aza ya ebe a!
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Internetntanetị, ma ọ bụ oge niile ma ọ bụ oge ezumike, n'ezie ị nụla okwu a bụ influencer Ihe kariri otu ugboro, ọ bụ ihe dị njọ ịghara ịma ihe ọ pụtara, site na iji ọtụtụ okwu ntanetị, ndị na-eji Intanet eme ihe na-emepụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị, yabụ na ọ gaghị ekwe omume ịdebe. Mana "influencer" abughi okwu pere mpe nke enwere ike iwere n'ihi na obula n'ahia o di nma inwe udiri nkpuchi a na ikwurita okwu ya na ndi netizen.
1 Kedu ihe bụ influencer?
1.1 Ka anyị cheta Ngwakọta Ahịa.
2 Njikọ aka?
3 Anyị chọrọ ịga n'ihu na azụmahịa E-commerce?
3.1 Ihe Nlereanya na a ejiji influencer:
4 Ihe nlere na onye nwere mmuta na YouTube:
Kedu ihe bụ influencer?
Ọfọn, anyị nzọ anyị na ị zutere ma ọ dịkarịa ala otu onye n'ime ndụ gị onye gwara gị "Enwere m blog", "M na-eme vidiyo YouTube", "Ana m eme etemeete, edozi isi, nkuzi ejiji, wdg."
Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike izute onye mgba, yabụ, onye na-emetụta mmụọ bụ onye ahụ, n'ihi ha dijitalụ dijitalụ ọdịnaya ma ọ bụ n'ihi ọrụ gị n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'ihi ịntanetị agafeela ịrịa ma ọ bụ ọ ghọọla olu otu ngagharị ma ọbụ nke obere, ọkara ma ọ bụ nnukwu stratum nke ndị ọrụ Internetntanetị.
Enwere ike ịmara banyere ha ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị agakarị n'ịntanetị, dị otú ahụ bụ ụdị nke ụdị egwuregwu, ihe ọ drinksụ sugarụ shuga, ejiji, etemeete na ndị ọzọ na-eri ihe ikere òkè nke otu ma ọ bụ karịa influencers iji kwalite akara gị ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Ka anyị cheta Ngwakọta Ahịa.
Ngwakọta Marketing mejupụtara 4 isi P iji mepụta atụmatụ a (ahịa), otu n'ime ndị a bụ "Nkwalite" onye ọzọ dị mkpa nke masịrị anyị ebe a bụ "Plaza" ma ọ bụ ebe a na-ere ọrịre na nrụpụta ngwaahịa a rue mgbe aka onye na-eri ya.
Otu influencer na-abụ ọnụ ọgụgụ ahụ na netwọkụ mmekọrịta na dum netwọk na ejedebe na-enye ikpeazụ metụrụ ihe oyiyi nke gị ngwaahịa, si otú na-enye ịrị elu na-ekwu dị ka “Achọrọ m ndị akpụkpọ ụkwụ na Kortajarena M na-eji na azụmahịa ”,“ Ga-amasị m nwere otu ama na Sarah Escudero".
Ngwaahịa na echiche niile onye mmetụta nwere ma ọ bụ na-akwalite ghọrọ isi ihe, nke mere na dị ka ọchụnta ego ọ gaghị adịrị gị mfe inwe echiche ọjọọ banyere otu n'ime ndị na-eto eto bụ ndị ji obi ike mgbe ụfọdụ na-akpọ "ezigbo maka ihe ọ bụla" ọ na-egosi na ọ dịghị mgbe ha bụ, ha agaghịkwa adị, ndị na-eme ihe ike nọ ebe a n'ịwa echiche uche.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ejighi oru, ọ dị mkpa ime ka o doo anya na influencer bụ otu ihe dị ka ịsị “mmetụta"Maka otu ihe a, ndị mmadụ ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ na-agbaso echiche, omume ma ọ bụ ebumnuche nke ndị a. Ọ bụrụ na ị maghị ụwa nke ịntanetị, ị nwere ike ịnọ na-eche"ha na-achịkwa echiche na echiche nke ndị niile na-eso ụzọ ha", Azịza nke ahụ bụ etiti"Ee na mba”, Ndị na-eso ụzọ na-agbaso onye na-emetụta ihe n'ihi na echiche ya, omume ya na charisma nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'otu ụzọ ahụ polar bear si Coca-Cola mere ka anyị chere maka Christmas iji hụ ya n'ebe ahụ n'ime akpa.
Ndị na-eme ihe ike na-ada site n'elu maka ịmepụta echiche ma ọ bụ ikwu okwu nke ụmụazụ ha na-ewe iwe, anọghị ma ọ bụ na-agbasoghị mmetụta ọmịiko ahụ ha jibu na-agbaso ọnụ ọgụgụ ahụ.
Ya mere, anyị na-ekwu maka ọmịiko.
Nke a bụ kpọmkwem ihe ịbụ ihe na-akpali akpali, ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ, ịkekọrịta echiche na ọmịiko na ọha mmadụ iji nweta nnabata dị ukwuu. O meela tupu ndị na - eme ihe ike tufuo nnukwu nkwekọrịta, nkwado na ikike ndị ọzọ n'ihi ihe, echiche ma ọ bụ onyonyo nke na - akwadoghị ụlọ ọrụ ha nọchitere anya.
Ọ bụghị echiche sitere na Isiokwu ndị na-emetụta ya, ahịa chepụtara ya n'ezie. Njikọ aka bụ ntinye nke onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ nwere akara, mmekọrịta ahụ ha nwere na ndụ ha kwa ụbọchị yana otu esi agbanwe omume ịzụ ahịa nke onye na-azụ ya.
Njikọ aka nwere ike ịnọchite anya isiokwu anyị ugbu a, Ego ole blọọgụ nke influencer a na-agụ kwa ụbọchị? Ọrụ dị a activityaa ka influencer a na-emepụta na ụmụazụ ya? Onye na-eme ihe ike a nwere ike ime ka otu ndị mmadụ gosipụta mmasị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ? N'ezie ha nwere ike, site n'ikwupụta echiche ha, nke a ga-emecha bụrụ "mbaga" ma ọ bụ nye ụdị a ezigbo akara ngosi.
Anyị chọrọ ịga n'ihu na azụmahịa E-commerce?
Azụmaahịa na ịntanetị ọ na-aghọ di ọku, Nke ahụ bụ otú ọ dị! Everybọchị ọ bụla ọrụ ọrụ gị gafere, ọ na-akwụsị ịbụ ihe ọhụụ ma bụrụ ebe nchekwa nke onye na-azụ ahịa nke gbanwere onyinye anyị na nke ọzọ. Ndị na-emetụta ya dị ezigbo mkpa mgbe anyị achọghị ka ihe gafere, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ndị a na-eme ihe ike ebe a na Spain ndị mba ụwa matara, mmetụta dị ka Chiara Ferragni onye nwere ihe ruru ihe karịrị nde 5 na-eso ụzọ na Instagram.
Ugbu a, anyị chere na oke nghọta nke ikike a aghọtabeghị mana chee ihe karịrị nde mmadụ 5 nọ n'ụlọ, ọrụ ma ọ bụ njem na-enwe mmasị na kọmputa ha, ekwentị ha na ihe mbụ ha hụrụ mgbe ha na-elele netwọkụ mmekọrịta kachasị amasị ha. ngwaahịa gị; akpa, buutu, mgbaaka, okpu, ugogbe anya maka anwụ, ugegbe ọgụgụ, etemeete, nka ntu, ụfọdụ ọla ntị mara mma, Mmadụ nde 5 na-enwe mmasị na ngwaahịa gị site na nnabata nke onye na-emetụta ihe mmadụ ise ahụ chọrọ ka ọ bụrụ, nwee mmasị, ịkwanyere ugwu na mgbe ụfọdụ. Ndị na-eme ihe ike anaghị ewepụta ndị ahịa ọtụtụ oge, mana ha na-ewepụta ngwaahịa na oriri na-adịgide adịgide.
Iji bụrụ ihe na-emetụta ihe Might nwere ike iche na ọ siri ike ịbụ onye a ma ama, mana ya na ọtụtụ ndị mmadụ na ịntanetị anyị maara na a ga-enwe onye nwere ike ịgbaso echiche, echiche na echiche gị.
N'ezie ịghọ A choro ka onye nwere ikike nwee ụfọdụ ikike, ọbụlagodi dị ka onye nrụpụta ị bụ onye na-ere ere, n'ihi na ị na-erere onyonyo gị, ụzọ gị si ekwu okwu na ikike gị nke ị na-eji ekwupụta echiche. Ọ bụ ihe na-akụda mmụọ ịmara na e nwere ndị na-eme ihe ike na-adọrọ uche dị ukwuu na isiokwu nke na ọ bụrụ na mmadụ gbalịa itinye echiche na isiokwu ahụ, enwere ike ibo ha ebubo ịbụ "copycat" ma ọ nweghị aha ọjọọ dị njọ karịa nke ahụ emepụta na netwọk.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị bụrụ onwe gị, bụrụ onye mbụ, gosipụta ụzọ ọhụụ na ụzọ ọhụụ ị ga-esi hụ, ịza ajụjụ ma nwee mmasị n'ihe ndị ị masịrị gị. Bụrụ onye nwere mmetụta Ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume Dị ka ihe ọ bụla anyị chọrọ ire, ọ gụnyere ịzụ ahịa nke ahụ bụ otu usoro, nyocha na ịmụ banyere ọrụ ị ga - arụ dị ka onye na - emetụta ihe.
Ndị ụlọ ọrụ Spanish, mba, ọ bụghị naanị nnukwu ụlọ ọrụ! Companieslọ ọrụ niile, ọkara, obere na nnukwu, na-achọ onyonyo ziri ezi ka ngwaahịa ha bụrụ "isiokwu na-ewu ewu" ma ọ bụ nke a makwaara dị ka isiokwu nke oge a. Naanị na 2018 95% nke ụlọ ọrụ na Spain na-abawanye mmefu ego ha maka ndị na-eme ihe ike, gịnị ka nke a na-agwa anyị? Ezigbo onyonyo, nyocha ahịa na usoro ndị ọzọ ezughi ezu, dị ka anyị kwuru na mbụ, ịbụ onye a na-enwe mmetụta pụtara inwe ọmịiko.
Otu ụlọ ọrụ ọmịiko na-enweta ndị na-eso ụzọ ngwa ngwa, ma olee otu ụlọ ọrụ ga-esi nwee ọmịiko n’etiti ọtụtụ ndị asọmpi chọrọ imere ndị na-azụ ha ọmịiko? Na ihu enyi, ihu maara nke ọma, nke onye ọ bụla maara ma nabata dị ka akara ngosi nke ntorobịa, nnọchite anya na mmata.
Ihe Nlereanya na a ejiji influencer:
Dulceida. N'azụ aha a bụ Aida Domenech, nwa nwoke dị afọ 28 si Barcelona bụ onye nwere àgwà na agụụ ya maka ejiji jisiri ike tinye onwe ya dịka otu n'ime ndị kachasị mkpa na Spain. Naanị ịnọ na 2009 mgbe Aida malitere site na blog ejiji na-eme ka 7 gbasaa afọ ole na ole ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ nke ihe ịga nke ọma na isi okwu dị ka onye na-emetụta ejiji na Spain.
Ihe nlere na onye nwere mmuta na YouTube:
YouTube, kariri nani ikpo okwu maka vidiyo na ntaneti na ntaneti ederede di egwu. Ọ ghọọla netwọk mmekọrịta ebe ndị na-eme ihe ike bụ ndị isi, n'etiti ndị supersta ndị ahụ enwere otu ọkachasị si Spain. Rubius, amụrụ n’obodo Mijas afọ iri abụọ na asaa gara aga, malitere site na 2006 iji kesaa ọdịnaya nke ọdịyo ruo mgbe 2012 ebe Boomerang Live ga-ebuli aha ya site na mbara igwe ma mee ya nwa okorobịa na-eme ndekọ banyere egwuregwu vidio ọkachasị na ọchị ya na-enweghị atụ nke nwere ndị niile debanyere aha ya na ndị na-eso ụzọ ya na-eguzosi ike n'ihe nye ọdịnaya ya.
Egosipụta ndị na - emetụta ya dịka omume na - agba ume tozuru etozu na enweghị ikpe n’etiti ọgbọ ọhụrụ, Agbanyeghị, ikpe na ntozu oke bụ ihe dabara na nsogbu nke ọha na eze, ịta ụta n'ahịa maka ntozubeghị ọgbọ anaghị arụpụta ihe, ebe ha na-ekwu na ntozu oke ọgbọ na-adabere naanị na mgbasa ozi.
Nke bụ eziokwu ndị na-eme ihe, dị ka anyị kwuru na mbụ, Ha nọ ebe a ịnọ wee mee ụwa nke ịzụrụ, ire ma na-eri oke asọmpi, asọmpi ịmara onye nwere ike nwee ike nwee ọmịiko karị na otu esi eme ka akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Kedu ihe na ndị bụ ndị ama ama na Spen
Etu esi mejupụta Vitae Vitae na ndebiri weebụ?
Brandsdị kachasị mma nke Courtlọikpe Bekee